Ngwèrèegwùezeichè - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Ọmama ǹnyot'ùdì SAM-PK-K1332, siri ọgwaụ̀zọ̀zì m̀mụ̀zù California ǹkè Mmụ̀maagụgboo.
Ngwèrèegwùezeichè (Heterodontosaurus) bụ̀ anụ òtù òkèagbụ̀rụ ǹkè ngwèrèegwù àdịngwèrèegwùezeichè ǹke biri nà ogèjura gboo, bụrụ ogè garaàga ruru afọ̀ 200–190 ndè. Òkèùdì naanị kà ha mà, ngwèrèegwùezeichè tucki, bụ̀ ǹke ha tụ̀rụ̀ ahà nà afọ̀ 1962 màkà nkonkoisi ya ha hụpụ̀tàrà nà Eluàlà Nledà. Ahà òkèagbụ̀rụ â pụ̀tàrà "ngwèrè eze ichè", nà nkwutere n'a pụichè, ndoroeze dị ezeichè, ezeichè; ahà òkèùdìndụ̀ tòrò G. C. Tuck, onye kwadoro ndị nhụpụ̀ta. Ǹnyot'ùdì fọ̀rọ̀ ǹke ha chọpụ̀tàrà kem̀gbè, mà mkpịsịàhụ fọtụrụ ọ gàrị zu èzu, ǹke ha chọpụ̀tàrà nà afọ̀ 1966.
Mà ọ bụrụ nà ngwèrèegwù â gbàrà mkpụmkpụ, Ngwèrèegwùezeichè bụ̀rụ̀ otù anụ kara ịgb'agba nà àhụ nà ikwu òkèùdì ya, ya bụrụ o rùrù ihe wabàrà 1.18 m (3.9 ft) nà ịhẹ nwer'ike ị dị kà 1.75 m (5.7 ft) nà imi ogo ya, nà o sìrìesì ruru ịhẹ wabàrà 2 nà kg 10 (lb 4.4 nà 22.0). Àhụ ya dị̀ mkpụmkpụ ọdụ̀ ya dị ogologo. ogwèụkwụihu ya mkpịsị ìse gbàrà ogologo simara ya ike, ya pụrụ nà okwu ọ̀zọ nà ogwèụkwụàzụ ya gbàrà ogologo, dị ǹgàǹgà, nwerere mkpịsịụkwụ ànọ. Nkonkoisi tisàrà ogologo, dị warawara, kwụrụ kà nkọkwụàtọ m̀gbè ịnyotu ya si akụ̀kụ̀ ya. Nà ihu àlààgbà ya majùrù ọ̀tụ̀tụ̀ dị kà m̀pì. O nwèrèrè eze ùdì àtọ; nà elu àgbà ya dị̀ eze ntàkịrị dị kà eze ihu ya dị̀kọ̀tà ya nà òpìimi dị kà eze akpùrùgada. Òhèrè wàrà ọdụ ya nà "eze ǹtì" dị kà ọkị̀rị̀kà.
Ngwèrèegwùezeichè bụ̀ ònyereahà nà ahà n'e wu nà ikwu òkèagbụ̀rụ ịhẹàdịngwèrèegwùezeichè. Ikwu â kà h'e wèrè kà ǹke àgbaragboo mà òtù ọ̀nọ̀dụ̀ nà ime usòrò ǹke ngwèrèegwù ukwùnnụ̀nụ̀. E wezùga ọdụ ukwu ya, ngwèrèegwùezeichè bụ̀ ịhẹ h'e chèrè ọ bụ̀ anụ òriahịhịa, mà nà ọ bụrụ ịhẹ ọbụ̀là ọ gà a bụbụ anụ òriịhẹǹcha. Ewezuga nà m̀bụ h'e chèrè sị̀ o nwèrè ike ujeje ụkwụànọ, h'e chà ùgbù â nà à jèrèrè ijè òjenàụkwụàbụọ. Ịkwabàchì eze dị̀ gharaghara nà ò sojèkwàzị̀ nà ihu, ǹkè adịghị̀ kà ikwu ya. Òkèagbụ̀rụ àdịngwèrèegwùezeichè ǹke dị kà ànọ dịrịrị m'ọ bụrụ ịhẹ ọbụlà bụ̀ ịhẹ ha mà kà ngwèrèegwùezeichè siri mkpụrụkọta nnyomụàlà.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngwèrèegwùezeichè&oldid=64462
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 30 Ọnwa itoolu 2019, mgbe 13:49